Maxaynu U Samaysanay Xisbiyadda Qaranka? Cumar Maxamed Faarax – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
1:04 am » Guuguulaha Maanta 12:41 am » Diyaarado Ka Soo Kacay Saldhigyada Djibouti Oo Duqaymo Ka Gaystay Deegaanada Gobalka Salal 12:40 am » Xildhibaan Baar Oo Cod Dheer Kaga Digtay Halista Sicir Bararku Ku Hayo Nolosha Dadka 12:35 am » Cali Khaliif Oo Furitaanka Distoorka Ku Tilmaamay Xudunta Wada Hadalada 12:34 am » Xog-waranka Hooyo Wiil Iyo Gabadh Ay Dhashay Ku Weyday Tahriibka Iyo Guurka Qaaliyoobay Oo Sabab U Ah Dhallinyarada Badda Isku Biimaysa Maxaynu U Samaysanay Xisbiyadda Qaranka? Cumar Maxamed Faarax Published on Apr 06 2017 // Maqaalo “Uf Qabiilka Anaa Leh
Diblomaasi iyo taariikh yahankii Faransiiska ahaa ee la odhan jiray Alexis de Tocqueville oo noolaa 1805-1859, ayaa mar uu faaqidayay axsaabta Maraykanka, wuxuu yidhi; “Waxa jira rag badan oo Mabda’ leh oo ku jira xisbiyada Maraykanka, laakiin ma jiro xisbi mabda’ lihi” (“There are many men of principle in parties in America, but there is no party of principle”) Dunidda reer galbeedka ee aynu ka soo ergisannay nidaam dawladeedkooda axsaabta badan, waxay xisbi siyaasadeed ku sharraxeen “Waa ururka koox dad ah oo ku middeysan aragti, iskuna bahaystay inay saameyn ku yeeshaan ray’ul-caamka bulshada kuwaas oo u tartamaya doorashooyinka si ay u qabtaan xukunka dawladda.”
Dadka xisbi ku wada jiraa, waxay wadaagaan ujeeddooyin iyo hadaf, baadi-sooc u ah oo ay kaga duwan yihiin xisbiyada kale ee siyaasadda ee tartanku ka dhaxeeyo. Xisbiga siyaasiga ah, waxa horyaalla imtixaan ah inuu maskaxda dadweynaha ku kasbado aragtidiisa, hiraalkiisa siyaasadeed iyo ujeeddooyinka uu u taagan yahay inuu wax kaga qabto mustaqbalka. Haddaba, waxa jira shan waajibaad oo ay tahay inay xisbiyadda siyaasiga ahi qabtaan kuwaas oo kala noqonaya sidan:-
waxay koriyaan garaadka siyaasiga ah ee bulshada: xisbiyada qaran ee dalalka waxay masuuliyadi ka saaran tahay waxbarista, kor-u qaadista iyo abaabulka afkaarta dadweynaha, waana inay sare u qaadaan heerka fahamka siyaasadda ee muwaadiniinta dalkooda oo dhan.
2-Xisbiyadu waa inay si dhow ugu xidhnaadaan dadweynaha oo ay u abaabulaan isku soo baxyo ay shacabku badheedhahooda ka dhiibanayaan mowduucyada waaweyn ee dalka ka taagan. Marka dadweynaha la dhiso fikirkooda siyaasiga ah, waxay noqonayaan qaar si bisayl ku jiro codkooda ugu soo dooran kara dawladda ay doonayaan. 3- Axsaabtu waa inay ka shaqeeyaan xasiloonida siyaasadda wadanka: xisbiyadda tartamaya waxa looga baahan yahay inay u midoobaan in dalkoodu ahaado mid siyaasad ahaan xasilloon oo aanay xiisado iyo kala qaybsanaan gudaha ahi ka jirin. Waa in afkaarta xisbigu aaminsan yahay ay mudnaanta koowaad siisaa in siyaasadda waddanku noqoto mid xididdo adag ku taagan oo aanay gilgilaynin wax qulqulatooyin ah oo saaxada dhabqin kara.
Wakiilladooda Baarlamaanka: Golaha Baarlamaanku waa Wakiilladii dadweynaha. Xisbiyada siyaasadduna waxay xubnaha xisbigoodu ku leeyahay ay u dhiibaan qorsheyaasha siyaasadeed ee ay aaminsan yihiin xisbi ahaan si ay u gole geeyaan baarlamaanka hortiisa. Dawladaha Baarlamaaniga ahina xisbiga kuraasida ugu badan ee sharcigu jideeyay ku guulaysta ayaa soo dhisa dawladda cusub.
5-Xisbiyadu waa wershadda soo saarta
oggaamiyeyaasha: shaqada ugu muhiimsan ee xisbi kastaa waa inuu helo jiil hoggaamiyeyaal ah oo loo diyaariyo, loona carbiyo inay ka qaybgalaan doorashooyinka guud iyagoo xambaarsan himilooyinkii xisbigoodu higsanayay oo haddii ay doorashada ku guulaystaan-na soo dhisa dawladda waddanka maamulaysa muddo xileedkaas.
Inkasta oo dadka reer Somaliland ay lafta kaga jirto dimuqraadiyaddu, haddana waxa jira in hab-dhaqanka bulshada ee ku dhisan ardaayeysigu uu carqalad ku yahay inay tamariso nidaamkeenna
dimuqraadiyaddu. Waxa siyaasiyiinta hormuudka u ah xisbiyada qaranka ee u baratamaya doorashada madaxtinimada looga fadhiyaa inta aan la gaadhin bulshada in ay iyagu ka xoroobaan cunfiga reernimada. Ka hor inta aanay dadweynaha ka dabiibin in dimuqraadiyadeennu noqoto mid beelaysan.
ee ina Midayso ujeedo” Cumar Maxamed Faarax